သူမရဲ့ အတိတ်အကြောင်း ဘာလို့ သိဖို့လိုတာလဲ – Gentleman Magazine
သူမရဲ့ အတိတျအကွောငျး ဘာလို့ သိဖို့လိုတာလဲ
သင် တစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ အတိတ်ကို သိလေလေ၊ သူ့ရဲ့ မကောင်းတဲ့အချက်တွေကို ဂရုစိုက်ဖို့ လွယ်လေလေပါ။
တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ချစ်မြတ်နိုးကြလို့ ချစ်ဇာတ်လမ်းတစ်ခု စတင်ကြပြီ ဆိုတာနဲ့ တစ်ယောက်ရဲ့ ဘဝထဲ တစ်ယောက် ဝင်ရောက်ရစမြဲပါ။
သင်က သူ့ရဲ့ ဘဝဟောင်းက သင်နဲ့ ဘာမှ မဆိုင်ဘူး ထင်နေပါလိမ့်မယ်။ အတိတ်ကို အတိတ်မှာ ထားခဲ့လို ရတယ် ထင်နေပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒါက သဘာဝမကျတာ သင်သိပါသလား။
ကျွန်မဟာ လူတစ်ယောက်နဲ့ ချစ်မိခဲ့ဖူးပါတယ်။ မိုးမမြင် လေမမြင်ပါ။ ကျွန်မတို့ နှစ်ယောက်လုံး ချစ်လွန်းလို့ နောက်တစ်ဆင့် တက်ပြီး လက်ထပ်ဖို့တောင် ပြင်ဆင်နေပါပြီ။
တစ်ရက်တော့ စားသောက်ဆိုင် တစ်ဆိုင်က အပြန်မှာ သူစိတ်ပြောင်းသွားတယ်။ ပန်းခြံထဲ လမ်းလျှောက်တော့ ကျွန်မရဲ့ လက်ကို မကိုင်ဘူး။ ခုံတန်းတစ်ခုမှာ ထိုင်မိတော့ သူ့ရဲ့ အတိတ်ကို ပြန်ဖွင့်ချပါတော့တယ်။
ကျွန်မသူနဲ့ မတွေ့ခင် တစ်လအလိုမှာပဲ သူ့ရည်းစားနဲ့ ဖြတ်ခဲ့တာပါ။ သူမရဲ့ စိတ်ကျရောဂါကြောင့်ဖြစ်ပြီး သူက သူမကို ချစ်နေတုန်းပါ တဲ့။
ကျွန်မကတော့လက်ထပ်ဖို့ထိ အစီအစဉ်တွေ ချပြီးပါပြီ။ သူ့မှာ ပါလာတဲ့ အတိတ်ရဲ့ အရိပ်ကို မသိပဲနဲ့ပေါ့။ အဲဒါကြောင့် တစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ အတိတ်ကို မသိပဲ အနာဂါတ်ကို မစဉ်းစားဖို့ အစီအစဉ်တွေ ချခဲ့ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့….
၁. လူတစ်ယောက်ရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်ဟာ အကြီးအကျယ် ဖြစ်သွားနိုင်လို့ပါ
ဖောက်ပြန်တတ်တာ၊ ဆေးလိပ်သောက်တတ်တာ၊ လိမ်တတ်တာ၊ ဆိုတာတွေဟာ အကြီးအကျယ်ဆုံး အချစ်ကို ဖျက်ဆီးတဲ့ အရာတွေပါ။ အဲဒါတွေကို မသိပဲ ချစ်မိသွားပြီး အချိန်လွန်မှ သိလိုက်ရရင် မှားပါပြီ။
၂. သူတို့ဟာ သူတို့ဖြစ်နေရတဲ့ အကြောင်း ရှိလို့ပါ
အစပိုင်း Date တွေမှာ သင့်ရဲ့ ချို့ယွင်းချက်တွေကို ဝှက်ထားနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အချိန်ကြာလာတာနဲ့ အမျှ တဖြည်းဖြည်း ပေါ်လာမှာပါ။ ဘာ့ကြောင့် စိတ်ညစ်ရတယ်။ ဘာ့ကြောင့် အကြောင်းမရှိပဲ စိတ်ဆိုးရတယ် ဆိုတာတွေပေါ့။ အဲဒါတွေက အလကားမဟုတ်ပါဘူး။ သူ့ရဲ့ အတိတ်နဲ့ ဆိုင်နေပါတယ်။ အရင်ရည်းစားနဲ့ ဆိုင်ရင် ဆိုင်နေပါလိမ့်မယ်။
ဒါပေမယ့် လူတစ်ယောက်ရဲ့ အတိတ်ကို သိထားလေလေ၊ သူ့ချို့ယွင်းချက်တွေကို ရင်ဆိုင်ဖို့ ပိုလွယ်လေလေပါ။
၃. လျို့ဝှက်ခြင်းဆိုတာ အိုဟောင်းသွားမှာမို့ပါ
ခုခေတ်မှာ လျှို့ဝှက်တာ ခေတ်စားနေပါတယ်။ အဲဒါကလဲ အတိုင်းအတာ တစ်ခုထိပါပဲ။ ဒီလူနဲ့ ရည်းစားဖြစ်တာ ၆ လရှိပြီ သူ့အကြောင်း ဘာမှမသိသေးဘူးဆိုရင် သင် စိတ်ညစ်ရမှာပါ။
သင်နဲ့သူ ဘဝခြင်းဆက်ချင်ရင် တစ်ယောက်အကြောင်း တစ်ယောက် သိနေရမှာပါ။ လျှို့ဝှက်နေရင်တော့ အလံနီသာ ပြလိုက်ပါတော့။
၄. အတိတ်ရဲ့ အရိပ်ဟာ အမြဲခြောက်လှန့်နေမှာမို့ပါ
ရည်းစားဟောင်းတွေ မသင့်တင့်ဆုံး အချိန်တွေမှာ ပေါ်လာမယ်။ သင့်ရဲ့ နှစ်များစွာက မကောင်းသတင်းတွေ ပြန်ပေါ်လာမယ်။ သင်ဘယ်လောက် ကြိုးစားစား အတိတ်ဟာ ဖျောက်ဖျက်မရပါဘူး။
အဲဒါနဲ့ ကြုံရင် လန့်မသွားအောင်၊ စီစဉ်သင့်တာ စီစဉ်ရအောင် အတိတ်ကို ကြိုသိထားသင့်ပါတယ်။
၅. သင်က အမြဲ စူးစမ်းနေမှာမို့ပါ
သင့်ချစ်သူက ” အဲဒါ မပြောချင်ဘူးကွာ” ဆိုရင် သင် တွေးမိမှာက ” သိဖို့လိုတယ် ” ဆိုတာပါပဲ။
အဲဒါ သဘာဝပါ။ လူတစ်ယောက်ယောက်က တစ်ခုခု လျှိူဝှက်ထားရင် သင်က အဲဒါကိုပဲ သိချင်မှာပါပဲ။ အဲဒီ သိချင်စိတ်ကို ဖြိုခွဲဖို့ မလွယ်လှပါဘူး။
၆. အချစ်ဆိုတာ တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်း အားလုံးကို သိနေရမှာမို့ပါ
တစ်စုံတစ်ယောက် ကို ချစ်တာဟာ သူ့ရဲ့ ဘဝတစ်ခုလုံးကို ချစ်ရမှာပါ။ သူနဲ့ အနာဂါတ်ကို စီစဉ်ဖို့ သူ့ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေကို သိသင့်ပါတယ်။ သူလုပ်တဲ့ အမှားတွေကို သိရပါမယ်။
သင့်ချစ်သူမှာ သင်မပါတဲ့ ဘဝတစ်ခု ရှိခဲ့ဘူးတာ ငြင်းလို့ မရပါဘူး။ သင်က အဲဒါကို ဖက်တွယ်ပြီး သူမရဲ့ အတိတ်ကနေ အနာဂါတ်ကောင်း ဖြစ်လာအောင် ပြုစုပေးရမှာပါ။
သငျ တဈယောကျယောကျရဲ့ အတိတျကို သိလလေေ၊ သူ့ရဲ့ မကောငျးတဲ့အခကျြတှကေို ဂရုစိုကျဖို့ လှယျလလေပေါ။
တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျ ခဈြမွတျနိုးကွလို့ ခဈြဇာတျလမျးတဈခု စတငျကွပွီ ဆိုတာနဲ့ တဈယောကျရဲ့ ဘဝထဲ တဈယောကျ ဝငျရောကျရစမွဲပါ။
သငျက သူ့ရဲ့ ဘဝဟောငျးက သငျနဲ့ ဘာမှ မဆိုငျဘူး ထငျနပေါလိမျ့မယျ။ အတိတျကို အတိတျမှာ ထားခဲ့လို ရတယျ ထငျနပေါလိမျ့မယျ။ ဒါပမေယျ့ အဲဒါက သဘာဝမကတြာ သငျသိပါသလား။
ကြှနျမဟာ လူတဈယောကျနဲ့ ခဈြမိခဲ့ဖူးပါတယျ။ မိုးမမွငျ လမေမွငျပါ။ ကြှနျမတို့ နှဈယောကျလုံး ခဈြလှနျးလို့ နောကျတဈဆငျ့ တကျပွီး လကျထပျဖို့တောငျ ပွငျဆငျနပေါပွီ။
တဈရကျတော့ စားသောကျဆိုငျ တဈဆိုငျက အပွနျမှာ သူစိတျပွောငျးသှားတယျ။ ပနျးခွံထဲ လမျးလြှောကျတော့ ကြှနျမရဲ့ လကျကို မကိုငျဘူး။ ခုံတနျးတဈခုမှာ ထိုငျမိတော့ သူ့ရဲ့ အတိတျကို ပွနျဖှငျ့ခပြါတော့တယျ။
ကြှနျမသူနဲ့ မတှခေ့ငျ တဈလအလိုမှာပဲ သူ့ရညျးစားနဲ့ ဖွတျခဲ့တာပါ။ သူမရဲ့ စိတျကရြောဂါကွောငျ့ဖွဈပွီး သူက သူမကို ခဈြနတေုနျးပါ တဲ့။
ကြှနျမကတော့လကျထပျဖို့ထိ အစီအစဉျတှေ ခပြွီးပါပွီ။ သူ့မှာ ပါလာတဲ့ အတိတျရဲ့ အရိပျကို မသိပဲနဲ့ပေါ့။ အဲဒါကွောငျ့ တဈယောကျယောကျရဲ့ အတိတျကို မသိပဲ အနာဂါတျကို မစဉျးစားဖို့ အစီအစဉျတှေ ခခြဲ့ပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့….
၁. လူတဈယောကျရဲ့ လြှို့ဝှကျခကျြဟာ အကွီးအကယျြ ဖွဈသှားနိုငျလို့ပါ
ဖောကျပွနျတတျတာ၊ ဆေးလိပျသောကျတတျတာ၊ လိမျတတျတာ၊ ဆိုတာတှဟော အကွီးအကယျြဆုံး အခဈြကို ဖကျြဆီးတဲ့ အရာတှပေါ။ အဲဒါတှကေို မသိပဲ ခဈြမိသှားပွီး အခြိနျလှနျမှ သိလိုကျရရငျ မှားပါပွီ။
၂. သူတို့ဟာ သူတို့ဖွဈနရေတဲ့ အကွောငျး ရှိလို့ပါ
အစပိုငျး Date တှမှော သငျ့ရဲ့ ခြို့ယှငျးခကျြတှကေို ဝှကျထားနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အခြိနျကွာလာတာနဲ့ အမြှ တဖွညျးဖွညျး ပျေါလာမှာပါ။ ဘာ့ကွောငျ့ စိတျညဈရတယျ။ ဘာ့ကွောငျ့ အကွောငျးမရှိပဲ စိတျဆိုးရတယျ ဆိုတာတှပေေါ့။ အဲဒါတှကေ အလကားမဟုတျပါဘူး။ သူ့ရဲ့ အတိတျနဲ့ ဆိုငျနပေါတယျ။ အရငျရညျးစားနဲ့ ဆိုငျရငျ ဆိုငျနပေါလိမျ့မယျ။
ဒါပမေယျ့ လူတဈယောကျရဲ့ အတိတျကို သိထားလလေေ၊ သူ့ခြို့ယှငျးခကျြတှကေို ရငျဆိုငျဖို့ ပိုလှယျလလေပေါ။
၃. လြို့ဝှကျခွငျးဆိုတာ အိုဟောငျးသှားမှာမို့ပါ
ခုခတျေမှာ လြှို့ဝှကျတာ ခတျေစားနပေါတယျ။ အဲဒါကလဲ အတိုငျးအတာ တဈခုထိပါပဲ။ ဒီလူနဲ့ ရညျးစားဖွဈတာ ၆ လရှိပွီ သူ့အကွောငျး ဘာမှမသိသေးဘူးဆိုရငျ သငျ စိတျညဈရမှာပါ။
သငျနဲ့သူ ဘဝခွငျးဆကျခငျြရငျ တဈယောကျအကွောငျး တဈယောကျ သိနရေမှာပါ။ လြှို့ဝှကျနရေငျတော့ အလံနီသာ ပွလိုကျပါတော့။
၄. အတိတျရဲ့ အရိပျဟာ အမွဲခွောကျလှနျ့နမှောမို့ပါ
ရညျးစားဟောငျးတှေ မသငျ့တငျ့ဆုံး အခြိနျတှမှော ပျေါလာမယျ။ သငျ့ရဲ့ နှဈမြားစှာက မကောငျးသတငျးတှေ ပွနျပျေါလာမယျ။ သငျဘယျလောကျ ကွိုးစားစား အတိတျဟာ ဖြောကျဖကျြမရပါဘူး။
အဲဒါနဲ့ ကွုံရငျ လနျ့မသှားအောငျ၊ စီစဉျသငျ့တာ စီစဉျရအောငျ အတိတျကို ကွိုသိထားသငျ့ပါတယျ။
၅. သငျက အမွဲ စူးစမျးနမှောမို့ပါ
သငျ့ခဈြသူက ” အဲဒါ မပွောခငျြဘူးကှာ” ဆိုရငျ သငျ တှေးမိမှာက ” သိဖို့လိုတယျ ” ဆိုတာပါပဲ။
အဲဒါ သဘာဝပါ။ လူတဈယောကျယောကျက တဈခုခု လြှိူဝှကျထားရငျ သငျက အဲဒါကိုပဲ သိခငျြမှာပါပဲ။ အဲဒီ သိခငျြစိတျကို ဖွိုခှဲဖို့ မလှယျလှပါဘူး။
၆. အခဈြဆိုတာ တဈစုံတဈယောကျရဲ့ အစိတျအပိုငျး အားလုံးကို သိနရေမှာမို့ပါ
တဈစုံတဈယောကျ ကို ခဈြတာဟာ သူ့ရဲ့ ဘဝတဈခုလုံးကို ခဈြရမှာပါ။ သူနဲ့ အနာဂါတျကို စီစဉျဖို့ သူ့ရဲ့ အစိတျအပိုငျးတှကေို သိသငျ့ပါတယျ။ သူလုပျတဲ့ အမှားတှကေို သိရပါမယျ။
သငျ့ခဈြသူမှာ သငျမပါတဲ့ ဘဝတဈခု ရှိခဲ့ဘူးတာ ငွငျးလို့ မရပါဘူး။ သငျက အဲဒါကို ဖကျတှယျပွီး သူမရဲ့ အတိတျကနေ အနာဂါတျကောငျး ဖွဈလာအောငျ ပွုစုပေးရမှာပါ။
Previous: Gentleman တစ်ယောက်ရဲ့ အရည်အသွေးများ
Next: အောင်မြင်သူတယောက်ရဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးများ